Critical Thinking နဲ့ Creative Thinking ဆိုတဲ့ စကားလုံးမျိုးတွေကို ကျွန်တော်တို့အများစု ပြောဆိုဆက်ဆံနေရတယ့် ပတ်ဝန်းကျင်မှာ မကြာခဏ ဆိုသလို ကြားဖူးနေကြမှာပါ။ ဒီတော့ Critical Thinking ဆိုတာ ဘယ်လိုမျိုးလဲ? ဘယ်လို အတွေးအခေါ်မျိုးကို Creative Thinking လို့ခေါ်တာလဲ? Critical Thinking နဲ့ Creative Thinking ကဘယ်လို ကွာခြားလဲ ဆိုတော့ Critical Thinking ဆိုတာ ကိစ္စတစ်ခုနဲ့ ကြုံလာရတိုင်း ဘယ်လို အဖြေက အကောင်းဆုံး ဖြစ်မယ်ဆိုတာကို ချင့်ချိန် ဆုံးဖြတ်တဲ့ Thinking Skill တစ်ခုပါ။ Creative Thinking ဆိုတာကတော့ ဘယ်လို ဖြေရှင်းချက် အသစ် အသစ်တွေက ပိုမိုကောင်းမွန်နိုင်မလဲဆိုတာမျိုးတွေ တွေးခေါ်နိုင်စွမ်း ရှိတဲ့ skill တစ်မျိုးလို့ ဆိုလို့ရပါတယ်။